Sii Boggaaga Hantidhowrka Aaminaadda | Martech Zone
Sii Boggaaga Hantidhowrka Aaminaadda
Khamiista, Diseembar 27, 2012 Jimco, Diisambar 28, 2012 Douglas Karr
Dhowr jeer usbuucii waxaan ku dhacaa websaydh shirkadeed oo kaliya si aan u weydiiyo inay run ahaantii ganacsi ku jiraan iyo in kale, dhab ahaantii wax ganacsi ah, ama ay yihiin kuwo lagu kalsoon yahay oo ku lug leh. Shirkaduhu waxay maalgashadaan websaydh xitaa ma ogaanayaan in barta ay leeyihiin ay tilmaam u noqon karto inaysan aamin ahayn.
Aaminaaddu waa qayb weyn oo ka mid ah beddelaadyada. Waa inaad bilowdaa inaad isweydiiso, kumanaanka qof ee booqanaya degelkeena, sidee ku noqon waayaan? Haddii kalsoonidu tahay arrinta, waxaad samayn kartaa xoogaa isbeddello aad u yar oo soo saara natiijooyin aan caadi ahayn.
brandingeksperten - Calaamadeynta bartaada ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta haddii lagu kalsoon yahay iyo in kale. Shirkado aad u tiro badani waxay ku tiirsan yihiin astaamo si liidata u horumarsan, sawirro aan u dhigmin, iyo nuqul qoraal ahaan liidata. Haddii nashqaddaadu u egtahay hal milyan oo doollar, waxay dhiirrigelin doontaa kalsoonida martidaada. Hadday tahay mashup ka mid ah farshaxanka farshaxanka iyo farshaxankaagii ugu dambeeyay ee Rinjiga, wax badan ha filan.
taariikhaha - Ma leedahay wax taariikhi ah oo ku yaal bogga guriga iyo madax guud ama lugooyo aan hadda ahayn? A © 2009 waa calaamad la hubo oo ah in bog internet ah aan la cusbooneysiin dhowr sano, taasoo ka dhigeysa booqdaha inuu shaki ku jiro inuu shaqeynayo iyo in kale. Hubso in dhammaan taariikhaha ku taxan boggagaaga ay aad u dhow yihiin - qoraalada baloogyada, kaqeybgalkii ugu dambeeyay ee bulshada, saxaafadda ugu dambeysay, iyo taariikhda xuquuqda daabacaadda!
Sawirada kaydka - Intii aan u adeegsaneyno sawirrada keydka macmiil kasta, waxaan iska ilaalineynaa inaan u isticmaalno sawirrada keydka ama qaababka sawirada ee aan ku aragno bogagga kale. Haddii qof kasta oo ka mid ah dadka boggaaga ku jira uu yahay isla qof timo cad leh oo leh headset ay shirkadaha kale ee warshadaha ku leeyihiin degelkooda, looma aqoonsan karo inaad tahay ilo lagu kalsoonaan karo. Haddii aad tahay shirkad sharci ah, waa wax aad u macquul ah inaad sawir ku qaadatid shirkaddaada halkaasoo aad ku qasan karto boggaaga labadaba sawirro iyo sawirro dhab ah.
Lambarka taleefanka - Haddii aan qof la ganacsanayo, waxaan rabaa lambarka taleefankooda. Markii aan imaado degel internet oo aan lahayn, waxaan inta badan aadaa tan ku xigta. Inaad ka jawaabtid ama aadan ka jawaabin taleefanka ma ahan su'aasha… waa haddii iyo in kale meheraddaadu si sharci ah ugu qoran tahay ganacsi leh lambarka taleefankeeda. Iyo nambarka lacag bixinta ayaa xitaa ka sii fiican.
Cinwaanka - Bixinta cinwaan ganacsi ayaa kuu oggolaaneysa rajadaada inay ogaato inaad maal gashatay meheraddaada oo si fudud lagu heli karo. Shirkadaha iyo shakhsiyaadka way ka labalabeyaan inay ganacsi sameeyaan… gaar ahaan internetka… haddii aysan ogeyn in shirkaddu ay jir ahaan joogto meel uun. Oo sanduuqa UPS ma gooyo, raali ahow!
profiles - Miyaad haysaa sawirro dhab ah oo ku saabsan shaqaalahaaga, magacyadooda iyo mas'uuliyadahooda goobtaada? Haddii aadan sameynin, waxay soo jiidan doontaa dareenka dadka ku soo booqda oo laga yaabee inaysan kula ganacsan doonin maadaama aysan ku aqoonsan doonin. Dejinta sawirrada muuqaalka dhabta ah waa muhiim - siinta waji shirkaddaada shirkadeed.
Hawlgelinta Bulshada - Iyada oo ay weheliso sawir muuqaal ah oo dhab ah, waxaad leedahay xiriir isdaba-joog ah oo aad la leedahay dadyowga Twitter iyo Facebook. Haysashada shabakad bulsheed firfircoon waa hab fiican oo lagu hubiyo in dadku u arkaan in meheraddaadu tahay mid lagu kalsoonaan karo. Ka jawaab celinta iyo waxqabadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan kaqeybgalkaaga bulshada ayaa muhiim ah sidoo kale.
siyaasadaha - Siyaasadaha guud ama sharraxaad qoraal ah ee hababka lacag bixinta, qaababka gudbinta iyo rarka ayaa aasaas u ah oo martidaada siinaya faham adag oo ku saabsan ganacsigaaga. Tani waa sababta ay goobaha e-commerce had iyo jeer ugu dhajiyaan siyaasadaha soo celinta iyo qiimaha dhoofinta xagga hore. Waa inaad sidoo kale!
Shahaadooyinka iyo Xubinnimada - Miyaad ka tirsan tahay koox saddexaad, kooxo warshadeed oo sharci ah, ma haysaa wax caddeyn ah, ma leedahay hanti-dhawr dhinac saddexaad ah, shuruudaha caymiska, iwm. Ku siinta macaamiishaada macluumaadka lagama maarmaanka u ah shahaadooyinka dhinac saddexaad iyo kormeerku waxay ku dejineysaa iyaga xasilooni. Goobaha Ecommerce waxay dhigaan shahaadooyin laga helo ilo sida AAMIIN iyo McAfee AMMAAN.
Maxay yihiin calaamadaha kale ee tilmaamaya ee ku saabsan haddii aad ku kalsoon tahay shirkad iyada oo ay tahay aragtida internetka? Maxaad ku dari lahayd xisaabinta kalsoonidaada?
Tags: kafeekalsoonihanti dhowrkatusale
Mar alla markii aan akhriyey dood ku saabsan “© 2009” - haddii taasi macnaheedu tahay in goobta aan la cusbooneysiin ama aan si ula kac ah loo beddelin si loo muujiyo in shirkaddu taariikh hore leedahay. Waxaa jiray fikrado badan laakiin midka aan ugu jeclahay waa tusaale © 2009-2012.
Sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro liiska emayl shaqeynaya oo nagu filan Qaybta anaga sida waxyaabo sidoo kale muhiim ah. Dhammaan calaamadahaani waxay umuuqdaan kuwo aan qiimo badnayn ama yar laakiin ku raacay Douglas waxay tilmaam u yihiin in goobta laga yaabo inaysan aamin ahayn. Qofka bilowga ah ee aniga oo kale ah ee websaydhkeena $ earch masuuliyadu way weyntahay. Kuwaani waa faahfaahin aad u tiro badan oo la hirgaliyo si loo gaaro aragti lagu kalsoonaan karo. Waxaan dooranay inaan tusno wajigeena shirkada isla markaana aan sawiradeena dhigno sidoo kale. Waan ku faraxsanahay markaan ku arko qaabkan baraha kale sidoo kale.